Ravalomanana Marc : Vonona amin’ny fampihavanam-pirenena · déliremadagascar
Vaovao kely	 29 octobre 2017 .
Tokony hisy fifanarahana mihitsy ataon’ireo kandida sy mpanao politika hiatrehana ny fifidianana amin’ny taona ho avy , hoy Ravalomanana Marc raha tsy izany, hoy izy, dia tsy hisy fifidianana eken’ny vahoaka eto Madagasikara. Tsy ho mora ny fiatrehana io fifidianana io raha tsy misy izay ary tokony hazava amin’ny rehetra ihany koa ny fitsipi-dalao. Ny hisian’ny fifidianana tena eken’ny vahoaka, dia ny fifanakalozan-kevitra.
Namafy Ravalomanana Marc ny amin’ny hirotsahany hofidiana amin’ny taona ho avy. Vonona ihany koa ny tenany ny amin’ny fampihavanam-pirenena. Mahatsiaro ho tompon’andrikitra ny tenako tamin’ny fotoana nitondrako ity firenena ity, hoy Ravalomanana. Mihavana amin’ny Malagasy rehetra ihany koa izany hoe tsy hambo-po na tendrim-po ny filatsahana hofidiana fa firenena mihitsy no tsy maintsy jerena.
Mampalahelo ny mahita ny Malagasy hanaovan’ny olona tsindry ankehitriny, hanavotra ireo aho, hoy hatrany ity filoham-pirenena teo aloha ity.